Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukhenketho lwasePuerto Rico ngoku luyachuma
IPuerto Rico inepesenti ephezulu yabantu abagonywe ngokupheleleyo kwi-coronavirus e-United States ukusuka ngo-Oct. 19, ngokwedatha evela kumaZiko oLawulo lweSifo kunye noThintelo. Ngaba kungenxa yoko le nto ukhenketho luphumelela apha?
I-Dashboard yoBuyiselo yoMbutho wokuHamba wase-US eneenkcukacha ezisuka kuQoqosho loKhenketho iqaqambisa iPuerto Rico njengenkokeli ekubuyiseni. Xa kuthelekiswa inkcitho yenyanga, ngokomyinge, i-US yayimalunga ne-11% ngaphantsi kwexesha elifanayo kwiminyaka emibini edlulileyo ngoSeptemba. Kodwa inkcitho yokuhamba ePuerto Rico yayingaphezulu kwe-23% ngaphezu kwelo phawu. Ngelixa amazwe asibhozo aseMelika ebona amanqanaba enkcitho yeendwendwe ngaphezulu kuka-2019, asuka phakathi kwe-1% kunye ne-9% ephezulu ngelixa inkcitho yeendwendwe zasePuerto Rico yayingama-23% ngaphezulu kweminyaka emibini edlulileyo.
I-73% enempilo yabantu basePuerto Rico bebonke be-3.3 yezigidi bafakwe ngokupheleleyo kwintsholongwane, ngokutsho kwedatha ye-CDC. Ummandla wase-US ukwanelinye lawona mazinga asezantsi osulelo lwe-COVID e-US, ngamatyala ali-18 kuphela aqinisekisiweyo phakathi kwe-100,000 yabahlali kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo.
Ezi ndlela zintle ziphakamisa iindawo zokuhamba zeSiqithi, hayi eyona incinci igalufa. Iikhosi ezili-18 zasePuerto Rico, iilwandle kunye nezinye iindawo eziphuculweyo zetropiki zilungele ukuphumla kunye nokuhlaziywa ngexesha lokuwa nasebusika, xa amaqondo obushushu ephakathi kwe-80s.
Igalufa iyaphumelela ePuerto Rico ngexesha lo bhubhani, ukusukela kukhuseleko lwendalo kunye nokungena ekuhlaleni okufunyenwe kumdlalo nakwiSiqithi. Iikhosi zisuka kubunewunewu ukuya kumasipala, zisasazeka kulo lonke elasePuerto Rico kunye neqela elikufutshane neSan Juan. Iimbono zeOceanside, imithi yekhokhonathi, kunye nehlathi lemvula elibonakalayo lisakhelo izicwangciso zazo. Amanqaku amaxabiso, umhlaba, isitayile soyilo, kunye nezixhobo ezinxulumeneyo ziyahluka kwaye ziyahambelana.
Isiqithi yindawo yomoya yeCaribbean. Ubuhlobo obungakumbi bomhambi bufumaneka kwinkcubeko yeelwimi ezimbini zasePuerto Rico, imali yase-US, kwaye akukho pasipoti ifunekayo kubemi baseMelika.